Miraondraona Amin’ny Lanitra Sandoka ny Voromby Mpiadin’i Iran Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Miraondraona Amin'ny Lanitra Sandoka ny Voromby Mpiadin'i Iran Vaovao
Voadika ny 04 Marsa 2013 10:18 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Français, русский, Català, English
Voromby mpiady Qaher-313 iraniana manidina amin'ny lanitra natao photoshop.
Nasehon'ny bilaogera Iraniana tamin'ny fanombohan'ity volana (febroary) ity ny sary ofisialin'ny voromby mpiady tsy takamaso , Qaher-313, eny am-panidinana, izay raha ny marina dia sary namboamboarina tamin'ny alalan'ny photoshop. Na teo aza ny fanambaran'ny fitondrana Iraniana fa eny ampanaovana fisavana eny an'habakabaka ilay voromby, hitan'ny maso mañetin'ny bilaogera ihany fa sary nalaia nandritra ny lanona-panokafana natao tao Teheran io no nasiana tokotaniny hafa.
Raha nisy Iraniana maro (mety ho misy miaramila ao anatin'izany) niditra tao amin'ny Facebook no nanindrahindra ny Qaher-313, dia maro [koa] ny bilaogera no nanararaotra tamin'ny alalan'ny sary ho fanesoesoana ny fitondrana ao Teheran. Nanampy tamin'ny fahazoan-dry zareo nanesoeso moa ny sarin'ilay gidro lazaina fa nalefa an'habakabaka [mg] izay tratra fa sary namboamboarina ihany koa.
Rehefa nipoaka moa ny raharaha nanafintohina momba ilay gidro, nanoratra i Freedomseeker fa nitatitra ny fahombiazan'ny famokarana fiaramanidina mpiady tena maoderina tokoa navoakan'ny minisiteran'ny Fiarovana ny gazety famoaham-baovao Iraniana. Hitan'ilay bilaogera ho ‘hafahafa’ ny nampisehoana ny nampisehoana ilay voromby mpiady anaty trano (kianja mitafy) raha amin'ny alalan'ny fisidinana no fampisehoana azy amin'ny ankapobeny. Nomarihan'ny Freedomseeker ihany koa fa tahaka ny kelikely ihany ny habeny raha oharina amin'ireo fiaramanidina hafa mitovitovy aminy, ka nahatonga izao filazana izao:
Tsy afa-matoky ny filazan'ny Repoblika Islamika izahay mandra-pahitanay io mpiady io manidina, satria efa malaza ratsy ho mampiseho sary namboarina photoshop ny governemanta ary mampiseho ny maodely fa tsy ny tena izy.
Misy ny bilaogera sasantsasany mampahatsiahy fa misy ny lahara-pahamehana kokoa ho an'ny firenena ankoatra ny mandrafitra voromby mpiady vaovao.
Xcalibur namoaka sarin'ny voromby iray ary nanombatombana ny vidiny, tamin'ny fitenenana:
Mila mofo ny olona, fa tsy mpiady. Raha mba afa-mamahana ny olona noana amin'ny balafomanga sy ny bala manko isika!
666Sabz namoaka sary maro ary nampitaha ny Qaher-313 amin'ireo maodely vahiny, tamin'ny fanamarihana fa tena kely ny cockpit-n'ny Qaher [ny efi-panamoriana].
Tweatter nanoratra fa taorian'ny fiverenana maha-te-hidera ilay gidro avy eny an'habakabaka, dia mitady gidro adala hanamory ny Qaher-313 ny Repoblika Islamika.
Toa nifanarahan'ny bilaogera sy ireo tsy mino ho fotoana fanararaotra hanesoesoana ny fieboebon-kery ara-tafika ny Qaher-313. Ny lahatsary manaraka moa manao fanaporofoana ny fandrabirabiana amin'ny lazaina fa fiaramanidina mpiady andiany vaovao fahadimy navoakan'i Tehran.
Nokomandian'ny International Security Network (ISN) ho anisan'ny fiaraha-miasa hitadiavana ny feon'olo-tsotra amin'ny resaka fifandraisana manerantany sy fiarovana iraisampirenena ity lahatsoratra (teny anglisy) sy ny dikany amin'ny teny espaniola, arabo ary frantsay ity. Nivoaka voalohany tao amin'ny ISN blog, aloha ny lahatsoratra, jereo ato ny tantara hafa mitovitovy aminy.